> Resource> Free> Top 5 Best Free MOV Video Rotators
Na ịrị elu nke smartphone-weghaara videos, ị na-yikarịrị ka na-abịa gafee videos na e filmed saidwees. Nke a nwere ike ime ka ị na-elele siri ike. Luckily, n'usoro n'usoro gị video bụ a snap ọ bụrụ na ị họrọ otu n'ime n'elu 5 free MOV video rotators n'okpuru.
The emelitere version nke Movie Rotator ohere ọrụ iji tọghata fim na fim n'ime Eserese mode si odida obodo, ma ọ bụ Anglịkan. Ọ bụ zuru okè na-akpụ akpụ MOV faịlụ formats jidesie gị aka ẹkenịmde ngwaọrụ otú ị na-ekiri fim n'ebe nkasi obi. Movie Rotator 2.0 bụ kpọmkwem maka ndị na-kwalite ha sistem ka Windows 7 ma ọ bụ 8. Ọ bụrụ na ị ka na-eji XP ma ọ bụ Vista ị ga-arapara ochie version.
Akwado video formats na-ejedebeghị;
Nanị maka Windows 7 na 8.
Nke a rotator nwere ike n'ụzọ nkịtị-akpali gị aga kpodoro isi ala, na 90 degrees, ma ọ bụ mee ka ọ gaa film dị ka ị na-achọ na ya na a mirror. Ọ na-akwado a dum otutu ihe formats karịa Movie Rotator ike ọbụna na-akwado na iPhone, iPod Touch ma ọ bụ iPad nakwa dị ka ọ na-emebu MOV, MP4 na WMV faịlụ formats. Video Rotator 1.0.7 nwere ike ọbụna na-akwado uka flipping nke videos, ma ọ bụrụ na ị nwere gburugburu 50 ma ọ bụ ihe na-eme, ọ ga-bugharia ha niile.
Akwado iche iche video formats;
N'ụzọ kwụ ọtọ na mfe na-eji.
Jiri mgbe ụfọdụ.
Ihe na-amasị anyị banyere Bugharia Video bụ ikike bugharia na nnọọ ihe ọ bụla n'akuku, na otu onye dị mfe click gị òké. Ọ na-akwado niile bụ isi faịlụ formats gụnyere mpg, WMV ma ọ bụ MP4 ole na ole aha na ọ dị nnọọ mfe iji. Nanị drawback anyị hụrụ bụ 5MB ịgba na file size!
Ọ dịghị mkpa ka ibudata.
5MB ịgba na faịlụ size.
Nke a bụ nnọọ mfe mpempe software iji na-enyere onye ọ bụla na mfe ịgbanwe adiana nke gị na fim. Ọ na-akwado dị iche iche video formats dị ka MOV, AVI, MP4, WMV, MKV, 3GP na ndị ọzọ. Ozugbo ị na-aga, ọ bụ mfe iji, n'ụzọ kwụ ọtọ na gbalụ gbalụ.
Dị iche iche video edezi nhọrọ;
Ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface na mfe na-eji.
E nwere ụgwọ nweta nkwalite ya ka Gold Version.
Dị mfe iji na a mfe interface, a software-eme ihe karịrị nanị bugharia gị videos. Ọ ga-bugharia na batches na-ekwe ka ị na-eme ụfọdụ smart edezi dị ka trimming, cropping, clipping nakwa dị ka n'usoro n'usoro. Ọ bụ a bit nke niile na-abụ abụ, ihe niile na-agba egwú n'usoro n'usoro software dị ka ọ na-akwado a nnukwu ego nke faịlụ formats, gụnyere MOV n'ezie.
Na-akwado ihe ọ video formats;
Ọ bụrụ na mkpa karịa video edezi ọrụ e wezụga adiana, Wondershare Video Editor pụrụ inye aka. Nke a video edezi ngwá ọrụ na-enyere gị ka mfe akuku, bugharia, gbawara n'etiti, ikpokọta videos nakwa dị ka tinye pụrụ iche video mmetụta na nkeji. Download na-agbalị ya.